QM oo ka cabsi qabta in 200 oo qof lagu dilay duqeyn ka dhacday Muusil | Saxil News Network
QM oo ka cabsi qabta in 200 oo qof lagu dilay duqeyn ka dhacday Muusil
March 25, 2017 - Written by Cabdiqani Deeq
[Saxilnews.com]Qaramada Midoobay ayaa walaac ballaaran ka muujisay wararka sheegaya in dad badan oo rayid ah ay waxyeelo ku soo gaartay magaalada Muusil ee dalka Ciraaq.
Sarkaal sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay oo ku sugan gudaha waddanka Ciraaq ayaa sheegtay inay ka argagaxday dhimashada badan ee dadka soo gaartay, kaddib markii la sheegay in ugu yaraan 200 oo qof lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ay gaysteen xulafada uu hogaamiyo Mareykanka.
Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa waxa ay taageeraan howlgalka ciidammada Ciraaq ay ku doonayaan inay magaalada Muusil kaga qabsadaan ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah.
Warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramaysa in baaritaan uu haatan soconayo.
Lama oga marka rasmiyan dadkan la laayay.
Sikastaba ha ahaatee, weriyayaasha ku sugan galbeedka xaafadda Jadideh ee Muusil, ayaa sheegay in ay arkeen 50 mayd oo Jimcihii laga soo bixiyay dhismooyin halkaa ku yaal kaddib markii lagu burburiyay duqeyn intii lagu guda jiray bishan Maarso.
Ciidammada Ciraaq ayaa muddo bilooyin ah waxa ay wadeen weerar ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Muusil, taasi oo ah magaalada ugu muhiimsan ee ay kooxda IS ka joogto dalka Ciraaq, halkaasi oo ay haysteen tan iyo 2014.